Afyare Justice League waa ciyaar Afyare a geesi- theme ku salaysan taas oo uu leeyahay muuqaalada rafcaanka oo badan oo muuqaalada abaal qubays ciyaartoyda la. The duntu ka ciyaarta booska waxaa ka kooban characters ka DC lagu qoslo sida Batman, Superman, Siraad Green iyo dheeraad ah. Waa ciyaar xiiso leh booska la sawiro midabo iyo tayada kexeeyey.
Iyada oo ku saleysan theme a xiiso leh, tani waa Afyare xiiso leh waa in mid ka mid faraha la. Haddii aad tahay taageere ee metelin atoorayaal ka dibna this mid ah waa ciyaaro, waayo, wuxuu leeyahay muuqaalada sasabasho in sidoo kale abaal istaahilo in la siiyo ciyaartoyda ay. dheeraad ah, gameplay ee xaq theme ee ciyaarta booska this si fiican oo qoreysa gameplay fudud, Halkan booska this ku haboon yahay dhamaan noocyada ciyaartoyda.
More on sameeysa ee Slot Justice League
Game Slot Justice League ayaa la sameeyey by ay ciyaareyso ay Series, taas oo ah mid ka mid ah horumarinta ciyaaraha keentay in industry ee iGaming. Waxay keenaan kulan casino la kaamil ah oo ku dadaalaan in ay noqon madaxda cusub dunida ee adduunka ee ciyaaraha. Waxay dheelli-abuurka leh qaab-dhismeedka iyo abuuro kulan top casino uruursanayey ciyaartoyda in ay faraha la. Kooxda at Series wada shaqeeyaan si ay samatabbixin ugu fiican in ciyaartoyda ay la kulan kasta casino ay abuuraan.
Justice League ka kooban yahay 5 duntu iyo 25 paylines, iyo size qadaadiic ah dhaxeysa ee u dhexeeya 0.01-2.00, ciyaartoy u leeyihiin in ay meel ay bet ee kala duwan this ka dibna riix badhanka wareejin ah si aad u bilowdo ciyaarta. Haddii ciyaartoyda dalka calaamadaha u dhigma ka dib wareejin ah markaas aad loogu tixgalinayo doonaa guul. Waxaad u baahan tahay inaad taxaddar of size bet in aad hagaajin ah, lacagta kaga badiyeen waxa si wayn u goostay by size bet in lagu meeleeyo ah.
ciyaarta booska ku salaysan geesi- waxa uu leeyahay muuqaalada badan ciyaartoyda inuu ku guuleysto, duurjoogta ah waa dushana ee kooxda metelin atoorayaal oo dhan iyo waxa bedeli doona calaamado kale si ay u buuxiyaan isku guusha. The meeraha icon Golden, dhanka kale, waa kala firdhi in gayaysiin doona wareega gunno ah, wareega gunno ah; ciyaartoyda heli doonaa fursad uu ku guuleysto badan oo muuqaalada abaal.
Justice League waa ciyaar yaab leh Kaapelitalo Afyare in uu leeyahay badan oo abaalgud iyo muuqaalada bonus qubays ciyaartoyda la. ka hor Tag oo faraha la kulanka booska this at Coinfalls Casino oo loo helo oo ka mid ah abaal culus oo aad ku guuleysan karo.